ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအားသာချက်များ: လုံခြုံမှု, လျှို့ဝှက် & ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း
ပြီးတာနဲ့ဗြိတိန်ဟွန်ဒူးရပ်စ်အဖြစ်လူသိများ, ဘေလီဇ်အကြမ်းဖျင်းနယူးဂျာစီပြည်နယ်၏အရွယ်အစားသောသေးငယ်သောကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ 1990 မှာ, ရှင်သန်နှင့်ယနေ့တိုင်အောင်ချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်း ငွေထုတ်အမျိုးမျိုးများအတွက်န်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်နှစ်ခု-tier system ကိုအောက်ပါအတိုင်း။ တစ်ဦးကတင်းကျပ်ပြီးစောင့်ဗဟိုဘဏ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုသေချာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဘေလီဇ်အတွက်ဘဏ်များအားလုံးကြိမ်မှာ 24 ရာခိုင်နှုန်းကိုငွေဖြစ်လွယ်အဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံသည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတို့ကိုမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းငွေထုတ်အာမခံထား။
သွားကြောင်းကမ်းလွန်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်အတွက် cloaked နှင့်မြင့်မားသောအသားတင်ရကျိုးနပ်တစ်ဦးချင်းစီ၏သီးသန့်ဒိုမိန်းအမည်ဖြစ်ထင်ခဲ့ပါတယ်အခါရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံများနှင့်တရားစီရင်မှုတစ်ခုတိုးပွားလာအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်အများကြီးလိုအပ်နေသောအလင်းကိုသွန်းခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဘေလီဇ်ဘဏ်များ TIEA လမ်းညွှန်ချက်အောက်၌ဤအချိန်ဆိုသော်ငြား, ၎င်းတို့၏ငွေထုတ်၏ privacy ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အစောင့်အရှောက်ဆက်လက်။
သငျသညျဘေလီဇ်အတွက်တစ်ဦးချင်းအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်အကောင့်နှစ်ခုလုံးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦးက Belizean LLC ခိုင်မာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု features တွေရှိပါတယ်။ တစ်ဦး Belizean LLC အောက်တွင်ဘဏ်အကောင့်ထဲတွင်နေရာပိုင်ဆိုင်မှုများလုံလုံခြုံခြုံနဲ့မတော်မတရားယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေ၏ဆုပ်ကိုင်ထံမှအန္တရာယ်ကင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်မှုကို LLC သည်ကိုပိုင်ဆိုင်ရှိရာရောနှော, တစ်ဦးဘေလီဇ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှု Add, နှင့်သင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အာဏာအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆောက်အဦများ၏တဦးတည်းရှိသည်။ သင့်ဒေသခံတရားသူကြီးသင်တို့ငွေကိုယူဖို့ကြိုးစားပါတယ်သောအခါသူကသူသို့မဟုတ်သူမမျှအခွင့်အာဏာရှိပါတယ်ရာကျော်တစ်ဦးကမ်းလွန်ဂေါပကဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံမှအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ငွေစုအကောင့်အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားအတိုးနှုန်းအပါအဝင်ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှနံပါတ်အားသာချက်များရှိပါသည်။ ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုလည်းအလွန်အဆင်ပြေသည်။ သငျသညျဖွင့်နှင့်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဘေလီဇ်ဘဏ်အကောင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုအမေရိကန်ဘဏ်များမှတဆင့်ရရှိနိုင်မကျမည်အကြောင်းတစ်ဘေလီဇ်ဘဏ်မှတစ်ဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဝင်ငွေကိုတိုးပွားစေမသာ, ကလည်းစျေးကွက်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုလျော့ပါးစေရန်ကူညီပေးသည်။
ဘေလီဇ်အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှစ်ခုပုံစံများကိုလာ: ကာ A-Class ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိသောလိုင်စင်နှင့် B-Class ကိုလိုင်စင်ကန့်သတ်။ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ A-Class ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိသောလိုင်စင်ဆည်းပူးဖို့အရင်းအနှီးအတွက် $ 25 သန်းရှိရမည်။ သူတို့ကအစ $ 20,000 ၏နှစ်စဉ်လိုင်စင်ကြေးပေးဆောင်ရပါမည်။ ဘေလီဇ်-based အဖွဲ့အစည်းများသာ A-Class ကိုလိုင်စင်ရရှိရန် $3သန်း၏တစ်ဦးစာလုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။ A-Class ကိုလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူမဆိုအမျိုးအစားစတင်မည်နိုင်ပါတယ် ကမ်းလွန်ဘဏ် ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်း၏ဘေလီဇ်ရုံးကတဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။
B-Class ကိုလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသူသာသူတို့ရဲ့လိုင်စင်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ကြောင်းကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ငွေထုတ်ဖို့စစ်ဆေးခြင်းကိုသို့မဟုတ်လက်ရှိအကောင့်များကိုပေးစွမ်းမဟုတ်သလိုယေဘုယျအများပြည်သူသိုက်လကျမခံနိုငျသညျ။ ဤရွေ့ကားဘဏ်များနိုင်ငံခြားငွေငွေထုတ်ဘို့မဟုတ်, ဒေသခံ Belizean နေထိုင်သူများအဘို့အသီးသန့်ဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ်ကသာ $ 15,000 တစ်အောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်လိုင်စင်အခကြေးငွေရှိပါတယ်။ ဒေသခံလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦး $ 15 သန်းမြို့တော်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမယ်နေချိန်မှာနိုင်ငံခြားရေးဘဏ်များတစ်ဦး $ 1 သန်းမြို့တော်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည် tier system ကိုဘေလီဇ်ဘဏ်များပြည်တွင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးဖောက်သည်န်ဆောင်မှုများပြည့်စုံခင်းကျင်းပေးခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်နှစ်လိုဖွယ်ကမ်းလွန်ဘဏ်တည်နေရာအဖြစ်က၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းနေသော်လည်းဘေလီဇ်သေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေဆဲပင်။ ၎င်း၏ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနိုင်ငံတကာဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်များမှကု သ. မရသောသကဲ့သို့၎င်း၏နေထိုင်သူများအားဝတျပွုရမည်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏ဒီ type ထူထောင်အသုံးပြုပုံဘေလီဇ်မျှငွေထုတ်နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာမည်။
ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကို Safe စဉ်းစားသည်
အဆိုပါဖက်ဒရယ်အပ်ငွေအာမခံကော်ပိုရေးရှင်း (FDIC) ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားနှုန်း $ 250,000 ၏ပမာဏအထိအမေရိကန်ဘဏ်သိုက် insures ။ ဘေလီဇ်အာမခံဤအမျိုးအစားမပူဇော်ဘူးသော်လည်း, ၎င်း၏ဘဏ်များလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုမပါဘဲလည်ပတ်နေကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဘေလီဇ်၏ဗဟိုဘဏ်အလွန်နီးကပ်စွာနိုင်ငံ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းစောင့်ကြည့်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတင်းကျပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုသေချာစေရန်တစ်နှစ်မကြာခဏနှစ်ကြိမ်, အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်စာရင်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငွေချေးစံအတော်လေးတင်းကြပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဘဏ်များမှာအနည်းဆုံးတစ်ဦး 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုချေးငွေ-to-တန်ဖိုးကိုအချိုးလိုအပ်သည်။ ချေးငွေအပေါ်အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်မားတဲ့သတ်မှတ်ထားကြသည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏသင်အခကြေးငွေနှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သော add-ons တွေကိုအတွက်ဆခွဲကိန်းသောအခါအပင်မြင့်မားသွား 11 နှင့် 14 ရာခိုင်နှုန်းကြားကစား။
ငွေဖြစ်လွယ်အများအပြားဘေလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်များ၏လုံခြုံမှုနောက်ကွယ်မှအခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦး 24 ရာခိုင်နှုန်းကိုငွေဖြစ်လွယ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။ ဒါကဘေလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်ထဲမှာငွေရှိသမျှကိုတစ်ဒေါ်လာ၏ 24 ဆင့်ဆိုကြီးကြီးသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်ငွေသားရုပ်သိမ်းရေးကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဘေးဖယ်ထားခံရဖို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။ မည်သည့်ဘဏ်လုပ်ငန်း 101 ကျောင်းသားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတန်းတူဖြစ်ခြင်း, သင်ပြောပြလိမ့်မယ်အဖြစ်တစ်ဦးမြင့်မား-အရည်ဘဏ်ပိုလုံခြုံဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဘဏ်ရဲ့ငွေဖြစ်လွယ်က၎င်း၏ငွေထုတ်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုစိတ်အား။ ဘဏ်ပြေးဘေလီဇ်အတွက်ရှားပါး - အမှန်ပင်ကြောင့်အစဉ်အဆက်မှာအားလုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်။ ငွေထုတ်သူတို့အစဉ်အဆက်ကမလိုအပ်သင့်ပါတယ်သည့်အခါလျှင်နှင့်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံသူတို့ကိုမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ယုံကြည်ကြောင်းခံစားရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေလီဇ်တဦးတည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်ဘေလီဇ်ဒေါ်လာတစ်ဦးလဲလှယ်မှုနှုန်းမှာအမေရိကန်တဒေါ်လာရန်၎င်း၏ငွေကြေးတံစို့။ တည်ငြိမ်သည့်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ဘေလီဇ်ကြီးမားဒေါ်လာစျေးသိုက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းကိစ္စအဘို့, ဒါမှမဟုတ်ယူရို - ဤအမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးမှ၎င်း၏ငွေကြေးတံစို့သည်ဟုမဆိုတိုင်းပြည်အတွက်မှန်သည်။ ဘေလီဇ်ရဲ့ဘဏ်တွေကိုထပ်မံသူတို့ရဲ့တည်ငြိမ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်သည့်၎င်းတို့၏နိုင်ငံ၏တည်ငြိမ်ဒေါ်လာစျေးထောက်ပံ့ရေး, မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းတင်းကျပ်သောဘဏ်လုပ်ငန်း privacy ကိုထောက်ခံပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဘေလီဇ်ခေတ်သစ်ကြိမ်အတူတက်စောင့်ရှောက်အခွန်ရှောင်မှုကိုနှင့်တရားမဝင်ရရှိသော၏ခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ, 100 နိုင်ငံများထက် ပို. ဘေလီဇ်အပါအဝင်အခွန်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေးသဘောတူညီချက်များ (TIEA), လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီ။ TIEA သဘောတူညီချက်တွင်ပါဝင်ကြောင်းနိုင်ငံများနှင့်တရားစီရင်မှုအကြားဘဏ္ဍာရေးအခွန်အချက်အလက်များ၏အခမဲ့လဲလှယ်များအတွက် system ကိုပေးပါသည်။ ဒါကယေဘုယျအတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းပြည့်နှက်နေလေသည်ကြောင်းလျှို့ဝှက်၏ကုလားကာများရုတ်သိမ်းဖို့သိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့ပြီ အထူးသဖြင့်အခါဥပဒေမဲ့လှုပ်ရှားမှုထံသို့မရောက်ရ။ အချို့သောကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုကနိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်ပိုင်ရှင်ကသူတို့အောက်မှာဖွင့်လှစ်ထုတ်ဖေါ်ရန်ရာဇဝတ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်အချိန်ရှိခဲ့သည် '' ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ ' ဒါကလျှို့ဝှက်သာ untaxed ဝင်ငွေနှင့်မူးယစ်ဆေးများနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေ repositories ကအဖြစ်ကမ်းလွန်ဘဏ်များ၏ဂုဏ်သတင်းကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဘေလီဇ်နေဆဲ staunchly က၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော်ယခုဒီတော့ကတခြား TIEA လက်မှတ်ရေးထိုးနှင့်အတူသစ်ကိုလမ်းညွှန်ချက်များအောက်တွင်ပါဘူး။ တိုးမြှင့်အစီရင်ခံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတဖြည်းဖြည်း၎င်း၏နုတ်ထွက်ကာသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောဂုဏ်သတင်းဘဏ်လုပ်ငန်းမှာကမ်းလွန်ပေးသောအမှောင်ထဲမှာဇာတ်ကောင်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့နေကြသည်။ သငျသညျရိုးရိုးသားသားသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်လျှင်သင်ကြောက်ရွံ့ဘာမျှမရှိသည်နှင့်သင်သင့်အိမ်တိုင်းပြည်တစ်အခွန်-ပေးဆောင်နိုင်ငံသားပါပဲ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းလုံးဝဥပဒေရေးရာနှင့်ဘေလီဇ်ဘဏ်ထဲမှာတစ်ဦးဘဏ်အကောင့်ပိုင်ဆိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ထဲမှာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရှိခြင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အခွင့်အရေးယူ¤င်းကများအတွက်အဟန့်၏လုံလောက်စွာရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကသူတို့အနေနဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်၌ကျိန်းဝပ်သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်စျေးကြီးနှင့်အချိန်-စားသုံးစစ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရကိုငါသိ၏။ ဘေလီဇ်သင်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကော်ပိုရိတ်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကောင့်နှစ်ခုထားရှိခြင်းသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခွဲခြားခြင်းနှင့်အမှု၌တဦးတည်းအကောင့်ကိုကာကွယ်ပေးသည်အခြားတစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုအားဖြင့်အန္တရာယ်စောင့်ရှောက်။
တစ်ဦးကဘေလီဇ် LLC, ဒါမှမဟုတ်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ Belizean ဥပဒေပြဌာန်းမှတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာကြောက်မက်ဖွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု features တွေရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကိုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအကောင့်ဖွင့်ဖို့ဘေလီဇ်အတွက်မဆိုအမှန်တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ Plus အား, ဘေလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီထူထောင်အသုံးပြုပုံသငျသညျကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံး, debtor- trust- နှင့် LLC-ဖော်ရွေတရားစီရင်မှုတစျဦး၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထားပါ။ ဘေလီဇ်တစ်ခု LLC ဆန့်ကျင်သည်နိုင်ငံခြားစီရငျခကျြကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းနှင့်ပုံမှန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအေးခဲမယ်လို့တစ် Mareva တရားရုံးမိန့်အတွက်အသနားခံ disallows မထားဘူး။ အစမ်းစတင်နိုင်မီပိုကောင်းသေး, Belizean တရားရုံးများအရေးဆိုမှုပမာဏ၏အထိ 50 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးနှောင်ကြိုးလိုအပ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုပြည်ပမှာဘဏ်လုပ်ငန်းမှာအဘို့သင့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အကယ်. သင်သည်သင်၏ကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်ဘေလီဇ်ရွေးချယ်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချအကြောင်းပြချက်များများတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးဘေလီဇ်ဘဏ်ထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေသွင်းခဲ့လျှင်, သင့်ပိုက်ဆံကိုအမေရိကန်ငွေကြေးအဖြစ်ဘဏ်ထဲမှာရှိနေမည်။ ဒါဟာသင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ် Belizean ဒေါ်လာအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့လျှင်ထက်ကိုယ်ငွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်သင်ပြောင်းလဲခြင်းအခကြေးငွေပေါ်တွင်သင်တစ်ဦးဆုတ်ခွာစေအခါတိုင်းကယ်တင်ဆိုလိုသည်။
ဘေလီဇ်ဘဏ်များနေဆဲအရှိဆုံးအမေရိကန်ဘဏ်များထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားအတိုးနှုန်းပေးပါ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးဘေလီဇ်ဘဏ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုမျိုးစုံမှကူညီပေးသည်။ ဒီအမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ဝင်ငွေကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရန်ပုံငွေများကိုအမေရိကန်ဘဏ်ထဲမှာရပ်ထားခဲ့လျှင်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ရုံးထဲမှာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်သင်၏အပြန်လာအပြတ်အသတ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထိုမှတပါး, သင်မတူညီအစုစုကိုထိန်းသိမ်းရန်လျှင်ခန့်မှန်းရခက်စျေးကွက်အတက်အကျကြံ့ကြံ့ခံဖို့ပိုကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘေလီဇ်ဘဏ်များဟာသူတို့ရဲ့တင်းကျပ်သောချေးငွေလိုအပ်ချက်များအတွက်လူသိများကြသည်။ သို့သော်နိုင်ငံတကာအကောင့်နဲ့, သင်နောက်ဆုံးမှာသင့်ရဲ့ဘဏ်နှင့်အတူအကြွေးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေနိုင်သည်။ ဒါဟာသေချာပေါက်ချေးငွေများအပေါ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြင့်မားတဲ့အတိုးနှုန်းကြောင့်တစ်ဦး bargain မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျဘေလီဇ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့အမျိုးအစားအတွက်စေ့စပ်နေလျှင်မူကား, ခရက်ဒစ်လိုင်းတစ်ဦးအဖြစ်တော့အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအဆင်ပြေဖြစ်၏ သင်အလွယ်တကူအွန်လိုင်းသင့်အကောင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သငျသညျအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ, သင်သည်ဤစာမကျြနှာပျေါမှာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့မဟုတ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုလိုအပ်သောမူရင်းစာရွက်စာတမ်းများတချို့၏ notarized မိတ္တူမေးလ်မှရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ဘေလီဇ်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရှိသည်နှင့်အပြေးပြီးတာနဲ့သင်ကဘဏ်အပေါ်မူတည်ပြီးဒက်ဘစ်ကဒ်အပါအဝင်သင်တစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်တွင်းဘဏ်ထံမှရအခွင့်ထူး, များစွာသောခံစားနိုင်။ အများစုမှာဘေလီဇ်ဘဏ်များဟာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သေဆုံးသူ-အခမဲ့အမေရိကန်နံပါတ်များရှိသည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ကနေလုံးဝသင့်ရဲ့ဘေလီဇ်နှင့်သင့်ပြည်တွင်းကအမေရိကန်အကောင့်နှစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ။
ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာငွေထုတ်နီးပါးတိုင်းအမျိုးအစားများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုကျယ်ပြန့်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ဦးကနိုးနိုးကြားကြားဗဟိုဘဏ်ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းများလုံခြုံရေးသေချာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာတင်းကျပ်သောငွေဖြစ်လွယ်အဆင့်ကိုပြဋ္ဌာန်းလုံလောက်သောဒေါ်လာစျေးသိုက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်မှန်မှန်အားလုံးဘဏ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်လည်သုံးသပ်ဖွငျ့ဤပါဘူး။ ဘေလီဇ်တင်းကျပ် TIEA လမ်းညွှန်ချက်များမှလိုက်နာရန်ဖြင့်၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူတွေရဲ့ privacy ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ဦးဘေလီဇ်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်အများအပြားအားသာချက်များရှိပါသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကနေသောခေါင်းစဉ်: ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သင့်ပိုက်ဆံမှအမြန် access ကိုအဆင့်မြင့်အတိုးနှုန်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှအွန်လိုင်းဘဏ်စွမ်းရည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ဘို့ '' စံပြ '' ရဲ့အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းတည်နေရာရှိပါသည်။ သငျသညျလိုအပ်ချက်များကိုသင့်ရဲ့အထူးသဖြင့်အစုံတွေ့ဆုံတဲ့နိုင်ငံသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှေးခယျြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကာလ၌ဝတ်နှင့် legwork ပြုလျှင်သင်တို့ကို လိမ့်မည် သင်တို့အဘို့စံပြရဲ့ကမ်းလွန်တည်နေရာကိုရှာပါ။